12 Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 12 Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 28/01/2022)
Laga soo bilaabo tiyaatarka qadiimiga ah ee xiddigaha hoostooda ilaa hoolalka cajiibka ah ee quruxda badan, kuwan 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka ayaa ku habboon haddaad runtii rabto inaad la kulanto riwaayadaha ugu fiican abid. Shanghai, Berlin, London, iyo Talyaanigu waa wax yar oo ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto bandhig faneedkaaga soo socda ee tooska ah.
1. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Hoolka Royal Albert ee London
Waxaa furay mid kamid ah boqoradaha ugu caansan adduunka, Boqorada Victoria, Hoolka Royal Albert ee London, waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan adduunka ee heesaha. Markaad soo dhex gasho waxaad isla markaaba ku heshiin doontaa inay runti tahay boqortooyo. Qurxinta ilaa jawiga markay nalalku dammaan, riwaayad halkan ayaa ku siin doonta goosebumps.
Tan iyo markii ay 1871 taageerayaasha muusikada ee dhammaan noocyada, ka soo qayb gal Royal Albert Hall for 365 maalmood. Sidaas, inaad tahay jazz, dhagax, ama fannaan muusig fan ah, riwaayad toos ah oo muusig ah oo ka socota Royal Albert Hall waa waayo-aragnimo aadan rabin inaad seegto markaad joogto London. Hoolka Royal Albert Hall wuxuu ku yaal Koonfurta Kensington, waxaana si sahlan loogu heli karaa tuubbo.
2. O2 Arena ee London
Goobta labaad ee muusigga ugu fiican ee noo 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka waa O2 Arena ee London. Waa mid ka mid ah goobaha muusigga tooska ah ee ugu waaweyn Yurub, iyo adduunka, qolka leh a 20,000 dhagaystayaasha. Waxaa intaa dheer, gudaha 2008 xitaa waxay dhaaftay iibka tikidhada ee Madison Square Garden.
Amiir, Cirque Du Soleil, Furayaasha Alicia, iyo Abaalmarinta Brit, waa dhowr ka mid ah dhacdooyinka muusikada ee aad ugu raaxeysan karto O2 Arena. Waxaad u baahan doontaa inaad u safarto meel ka baxsan bartamaha London, ilaa Greenwich, laakiin waayo-aragnimada muusikada ugu fiican, gebi ahaanba waa u qalantaa dhib.
3. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Musikverein In Vienna, Awstariya
Loogu talagalay sidii sanduuqa muusigga ugu fiican, halbeeg xarrago leh, ah Wiener Musikverein, ama ururka muusikada, waa goobta ugu dambeysa ee muusikada caadiga ah ee Yurub. Hoyga Viennese philharmonics, hoolka music waxaa loogu talagalay in classic Qaabka macbadka Yurub, oo leh saqafka sare Frescos of Apollo.
364 maalmood sanadkii, music jecel adduunka oo dhan, u safri Vienna si aad u hesho waayo-aragnimo muusig soo jiidasho leh oo aan la ilaawi karin. Thanks to dhismaha, acoustics, muusik, goobta, iyo jawi, Musikverein-ka ayaa ugu sareysa 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka.
Salzburg ilaa Vienna Tareen Tareen ah
Munich ilaa Vienna Tareen
Graz ilaa Vienna Tareen
Prague ilaa Vienna Tareen Tareen ah
4. Verona Arena Gudaha Talyaaniga
The 12 goobaha muusikada ugufiican aduunka si fudud waa in lagu muujiyaa goobta ugufiican ee lagu soo bandhigayo epic opera. The Verona Arena waxaa la dhisay qarnigii 1aad, ilaa maantana waxaad arkaysaa iyadoo taagan, iyo martigelinta taageerayaasha opera ee adduunka oo idil.
Aagga Verona Arena waa dhagax hawo furan oo Amphitheater ah, derbiyadeeduna waxay kuu sheegi doonaan sheekooyinka glaadiators-ka waxayna kugula wareegi doonaan ereyada kooxaha fanaaniinta. Qaabka elliptical wuxuu dhigayaa fagaaraha Verona inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu fiican Talyaaniga xaflad heeso toos ah. Acoustics-ka, goobta ayaa habeenkii shidan, waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah goobaha muusikada ugu gaarka ah Yurub.
Rimini ilaa Verona Tareen
Rome ilaa Verona Tareen Tareen ah
Florence ilaa Verona Tareen
Venedik Verona Tareen
5. Xarunta Qaranka ee Farshaxanka ee Beijing, Shiinaha
Ukunta u eg, farshaxanka casriga ah gabal, xarunta qaranka ee farshaxanka bandhiggu waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu caansan ee ku yaal Beijing. Marka lagu daro foomka gaarka ah ee xarunta, agagaarkeeda waxaa jira haro macmal ah.
Xarunta qaranka ee farshaxanka bandhiggu waa meesha ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto opera iyo riwaayadaha tooska ah ee Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorbideyso waxqabadka muusikada dhaqanka Shiinaha, markaa hoolka xafladaha ayaa ah meesha ugu habboon.
6. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Arena Of Nimes ee Faransiiska
Amphitheater-ka Roomaaniga ugu qadiimsan wuxuu martigelin karaa tiro aad u fiican oo ah 24,000 music jecel. Goobtan muusikada cajiibka ah waxay soo jiidataa kumanaan soo booqdayaal ah sanad kasta, ilaa qaar ka mid ah dhacdooyinka muusikada maskaxda badan ee maskaxda ku haya Faransiiska.
Laga soo bilaabo pop laadinta casriga ah ilaa Hans Zimmer, dhacdooyinka muusikada tooska ah in the Arena of Nimes are unforgettable. Iyada oo gidaarrada lagu shido laydhadh midab leh habeenkii, nidaamka dhawaaqa on – Riwaayad halkan ka dhaceysa ayaa runtii ah koronto.
Paris ilaa Nimes Tareen
Montpellier ilaa Nimes Tareen
Marseille ilaa Nimes Tareen
Nice to Nimes Tareen
7. Kaymaha kaynta ee Berlin
Waxay ku taalaa Park Park ee ku yaal magaalada xafladaha Berlin, Waldbuhne waa madadaalo hawada furan. Luul Jam, Berlin philharmonic, iyo Taylor Swift waa dhowr ka mid ah fanaaniinta ku bixinaya riwaayadaha goobta weyn ee muusikada.
Waldbuhne waxaa markii ugu horreysay loo dhisay ciyaarihii Olombikada 1934, laakiin tan iyo markaas wuxuu ka mid noqday 12 goobaha muusikada ugu fiican Jarmalka, iyo adduunka. Waxaad ka mid noqon kartaa kuwa nasiibka leh 20,000 dadka ka qayb galaya bandhig faneed toos ah, ku wareegsan kaymo. Goobtan muusikada cajiibka ah ayaa martigelisay riwaayado fara badan oo caan ah sannadihii la soo dhaafay, markaa waxaad ka mid noqon kartaa taariikhda muusikada dhacdada weyn ee muusikada ee xigta ee ka dhici doonta Jarmalka.
8. Yuyintang Magaalada Shanghai, Shiinaha
Naga 12 liistada goobaha ugu wanaagsan ee muusiggu kuma dhammaystiri doonaan naadiga muusigga ee dhulka hoostiisa ku yaal ee Shiinaha. Yuyintang oo ku yaal Shanghai uma weyna goobaha kale ee muusikada adduunka, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Waa mid dhow, iyo nooc ka mid ah, sidaa darteed waxaad ku jirtaa habeen muusiko epic ah. Taageerayaasha Rock ee adduunka oo idil, Ku hayso naadiga Yuyintang liistada naadiyada dhagaxa ugu fiican markii ugu dambeysay 10 sano. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaysan laheyn wajiga hore ee ugu caansan, laakiin dhawaqa iyo gariirka ayaa kaa dhigaya inaad boodboodo.
9. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Felsenreitschule In Salzburg, Awstariya
Markaad ballansanayso tigidh kan Bandhigga Salzburg, halkaasoo ay ku toogteen Dhawaaqyadii Muusigga – waad hubsan kartaa goobtani muusigtu inay tahay mid cajiib ah. The Felsenreitschule waa hool muusig lagu qaabeeyey baroque, la 96 arcad ka dambeeya marxaladda.
Inta lagu jiro bandhigyada muusikada, arcad-yada deyrka leh ayaa lagu ifiyey midabbo, soo jiidashada dhagaystayaasha xitaa inbadan. Iyadoo aan loo eegin dookhaaga muusikada, riwaayad ka dhacday Austria Felsenreitschule waa dhacdo loogu talagalay dhammaan dareemayaasha – sida saxda ah ee muusiggu u dhaqmayo una saameynayo.
Munich ilaa Salzburg Tareen
Vienna ilaa Salzburg Tareen Tareen ah
Graz ilaa Salzburg Tareen Tareen ah
Linz ilaa Salzburg Tareen
10. Tiyaatarka Qadiimiga ah ee Taormina, Talyaaniga
Isagoo eegaya xeebta Calabrian, tiyaatarka qadiimiga ah ee Taormina waxaa dhisay Gariigta qiyaastii qarnigii 3aad ee dhalashadii Ciise ka hor. Ujeedada tiyaatarka xiisaha lihi waxay ahayd bandhig faneedyo waa weyn.
Iyada oo leh aragtiyo qurux badan oo ku saabsan badda iyo berriga, waxaad ka heli doontaa tan mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee muusikada adduunka. Sidaa darteed, qol leh koox muusig, qoobka, heesaa, waxaad arki doontaa in tiyaatarkaan qadiimiga ah uu yahay goob qurux badan oo qorrax dhaca ama dhacdooyinka muusikada tooska ah uga soo baxa.
Pisa ilaa Rome Tareen
11. Hoyga Mao ee Magaalada Shanghai
Laga soo bilaabo elektiroonigga ilaa dhawaaqyada, Mao Livehouse waa goobta ugu weyn ee muusikada ee Shanghai. Sidaas, haddii aad rabto inaad la kulanto sida ugu fiican nolosha cawayska ee Shanghai iyo goobta muusikada, markaa Mao Livehouse waa goobta IT-ga ee dadka maxalliga ah iyo dalxiisayaasha.
Mao Livehouse wuxuu leeyahay nidaamka codka ugu fiican Shiinaha, kana dhigeysa goobta ugu wanaagsan ee tooska loogu ciyaaro muusikada, iyo meel aad timahaaga hoos ugu soo daadiso oo aad ruxdo.
12. Goobaha Muusikada Ugu Fiican Dunida: Tiyaatarka Qadiimiga ah ee Liinta, Faransiiska
Tiyaatarka Roomaanka ee ku yaal Orange wuxuu madadaalinayay taageerayaasha muusikada ilaa qarnigii 1aad ee miilaadiga. Waxay ku taal magaalada Orange, waxay qabataa riwaayado, iyo xafladaha opera xagaaga sanadlaha ah ee Faransiiska.
Waxaad ka mid noqon kartaa 10,000 dadka ku raaxeysanaya riwaayad lama ilaawaan ah oo ka socota tiyaatarka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo Yurub. Tiyaatarka liinta waa a tareen raac ka yimid Marseille, laakiin safarka tareenka ee gaagaaban wuxuu kugu celin doonaa taariikhda, ilaa waqtiyadii Roman, iyo riwaayadaha ugu fiican riwaayadaha aduunka.
Paris ilaa Marseilles Tareen
Marseilles ilaa Paris Tareen
Marseilles ilaa Clermont Ferrand Tareen Tareen
at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno inaad qorsheyso fasaxaaga cajiibka ah 12 goobaha muusikada ugu fiican adduunka tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "12 Meelaha Muusikada ugu Fiican Dunida" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dsoየሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad u beddeli kartaa / ja ilaa / ru ama / de iyo luqado badan.
BestConcertsEurope	BestMusicVenuesInTheWorld	riwaayad	LiveMusicEurope	goobta muusigga	MusicVenues
Qoraalada la xidhiidha
Uunana socod Northern Italy By tareenka
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Samaynta Inta badan aad u safri
Qoraaladii u dambeeyay
10 Hababka Hal-abuurka leh ee loo Safro
10 Goobaha Arooska Ee Yurub Oo Cajiib Ah
10 Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka
12 Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan
3 Siyaabaha Ugu Wanaagsan Ee Loo Sameeyo Kaamka Everest Base
© copyright 2021 - Save A tareenka, Amsterdam, Nederlaan